Kooxda iskudubbaridda Koronaha ee Aagga caasimadda ayaa go’aamisay in deegaankooda ay ka sii socdaan xadaymaha iyo soojeedinnada shaqaynaya | City of Helsinki
Coronavirus updates from Helsinki » Information and customer services » Information on coronavirus in different languages
Recommondation: Wear a face mask
Coronavirus coordination group
Kooxda iskudubbaridda Koronaha ee Aagga caasimadda ayaa go’aamisay in deegaankooda ay ka sii socdaan xadaymaha iyo soojeedinnada shaqaynaya
Waxaa Aagga caasimadda si maalinle ah loogula soconayaa saamaynta ay xadaymaha iyo soojeedinnada shaqaynaya ku yeeshaan xaaladda safmarka. Si kastaba ha ahaatee isbeddelka wakhtiga kala gaddoonka sannadku ku yeeshay horumarka xaaladda safmarku waa mid ay adagtahay in wakhtigan la joogo lagu sameeyo qiimeyn lagu kalsoonaan karo.
Xadaymaha iyo soojeedinnada hadda shaqeynaya ee ay kooxda iskudubbaridka Koronuhu markeedi hore 26.11.2020 go’aamisay ayaa sii shaqaynaya illaa iyo 10.1.2021. Xadaymahan iyo soojeedinnadan waxaa hadda la sii wadayaa illaa iyo 31.1.2021. Go’aannadan waxaa la sameeyay iyadoo lagu salaynayo sawirka xaaladda cudurada faafa islamarkaasna la isticmaalayo qiimeyn dhammaystiran.
Si kastaba ha ahaatee xadaymaha la xiriira waxqabadka hiwaayadda carruurta iyo dhallinyarada iyo isu diyaarinta qoraalka imtixaanka dugsiga sare ee ardayda dugsiga sare dhammaynaysa ayeey kooxda iskudubbaridku markale ku qiimeynaysaa shirkooda 14.1.2021, iyagoo qiimeyntaas ku salaynaya horumarka xaaladda safmarka, xaaladda fiditaanka fayruska nooc ahaan isbeddelay iyo go’aannada cusub ee laga yaabo in xukuumaddu gaarto.
Ka sokow Helsinki, Espoo iyo Vantaa Kauniainen ayaa iyaduna raacaysa xadaymaha iyo soojeediinada ay go’aamiyeen kooxda iskudubbaridka.
Xadaymaha iyo soojeedinnada ay kooxda iskudubbaridka Koronuhu go’aamiyeen 26.11.2020 islamarkaasna shaqaynaya illaa iyo 31.1.2021.
Dhammaan waxqabadka hiwaayadaha ee ay degmooyinku qabanqaabiyeen (marka lagu daro waxbarashada farshaxanka ee aasaasiga ah) ee gudaha ah waa la joojinayaa waxqabadka hiwaayadda ee dadka ka weyn 20 sano ee bannaanka lagu qabtana waa la joojinayaa.
Dhammaan kaltannada hiwaayadda garoonnada dibadda ee dadka ka waaweyn 20 sano waa la baajiyay. Waxqabadka hiwaayadda ee dadka kayar 20 sano waxay ka sii soconayaan bannaanka iyo tookooyinka horay loo siiyay. Lama qabnqaabinayo tartannada, beretennada ama waxqabadyada ciyaaraha is aragga ah. Kaltanno cusub lama bixinayo.
Garoonnada bannaanka ee degmooyinku waa kuwa ay isticmaalayaan dadka degmada deggan xilliyada ka baxsan waxqabadka hiwaayadda carruurta iyo dhallinyarada. Ilaalada iyo joogitaanka hagayaasha dhallinyarada ee garoonnada waa la kordhiyay. Qolalka labiska iyo dhismayaasha daryeelka waa la xirayaa.
Xiisadda isboortiga dugsiga waxaa lagu qabanayaa bannaanka iyo gudaha dugsiga, gooba jimicsi oo kale laguma qabanayo.
Fursadaha tababarka iyo tartanka ee isboortiga sare iyo tartanka waxaa lagu sugayaa heshiiska ruqsadda ciyaaraha is aragga ama heshiiska isboortiga ee isboortiga xirfadda ah oo waafaqsan nidaamka Wasaaradda waxbarashada iyo dhaqanka, waxqabadka kooxda xulka qaranka, Guddiga Olombikada ee ciyaaryahannada la taageero iyo lacagta cawimaadda ciyaaryahannada Wasaaradda waxbarashada iyo dhaqanka oo la la shaqaynaya Akadeemiyada isboortiga ee aagga caasimadda.
Kooxda iskudubbaridku waxay si adag u soojeedinaysaa in hawl-wadeennada gaarka ahna ay u hoggaansamaan ixadaymahan.
Xadaymuhu waxay shaqaynayaan 30.11.2020 – 31.1.2021.
Qaqanqaabinta munaasabadaha dadweynaha
Dhammaan munaasabadaha gudaha iyo bannaanka lagu qabanqaabiyo iyo shirarka dadweynaha waxaa la mamnuucayaa wakhti cayiman, iyadoo qabanqaabinta munaasabadaha dadweynaha iyo shirarka ay ka qaybgelayaan ugu badnaan 10 qofood la oggolaanayo, ayaa waxaa haddana shardi u ah in habka ammaankoodu raaco tilmaanbixinnada ay wasaaradda waxbarashada iyo dhaqanka iyo THL bixiyeen 21.9.2020. Munaasabadaha ay ka qaybgelayaan ugu badnaan 10 qofood ee la qabanqaabinayo waa in ay noqdaan kuwa qasab oo aan laga dhaafi karin oo kaliya, sida shirarka shirkadaha ee sharcigu qorayo iyo shirarka ururada, waana in shirarkaas baqashadooda looga faa’iidaysto khadka internetka, haddii ay suurrgaltahay.
Xadaymuhu waxay shaqaynayaan 11.1. – 31.1.2021. Go’aanka siiwadista xadaymaha ee deegaanka waxaa 5.1.2021 gaaray maamulka Gobolka Koonfurta Finland.
Qaqanqaabinta munaasabadaha gaarka ah
Kooxda iskudubbaridku waxay si adag u soojeedinaysaa, in xiriirka dhow lagu xaddido dadka isku guri deggan ama dadka lala barbardhigo dadka aadka isugu dhow. Kulamada kale ee gaarka ah ama isu imaatinka qoyska waxaa la soo jeedinayaa in aan la qabanqaabin. Waxaa la soojeedinayaa in ka qaybqaadashada aaska ama xusku uu weli ahaado mid ku xaddidan koox aad u yar oo ehel ah.
Soojeedintu waxay shaqaynaysaa 30.11.2020 – 31.1.2021.
Goobaha macaamiisha ee dadka oo dhan u furan weli waa xiranyihiin. Tan waxaa loola jeedaa tusaale ahaan dhammaan goobaha jimicsiga gudaha, guryaha dhaqanka, madxafyada iyo guryaha dhallinyarada ee magaalada. Waxqabadka machadyada aqoonkororsiga waa la hakiyay. Beerta xayawaanka ee Korkeasaari xittaa waa xirantahay.
Goobaha lagama maarmaanka ah ee ay isticmaalaan adeegyada sooshalka iyo caafimaadka iyo barbaarin-horaadka, waxbarashada aasaasiga ah iyo waxbarashada heerka labaad waa ay furnaanayaan. Waxaa sidoo kale sii soconaya isticmaalka kambuyuutarada danta lagu qabsado ee aan laga maarmin ee maktabadaha iyo qaybinta af-shareerka ee dadka uu dhaqaalahooda yaryahay. Magaalooyinku iyaga ayaa go’aamiyay goobaha bixiya adeegyada aan laga maarmin, kuwaas oo u furnaanaya si xadaysan oo caafimaad ahaaana ammaan ah.
Kooxda iskudubbaridku waxay hawl-wadeennada gaarka ah si adag ugu soojeedinaysaa in ay xiraan goobaha jimicsiga iyo xilliyada firaaqada ee kuwaas u dhigma.
Maktabaduhu waxay weli bixinayaan adeegyo xaddidan, oo ay ku jiraan:
Ka soo qaadashada agabka iskifaalaha alaabta la xajistay la saaro iyo isticmaalidda iskifaalayaasha alaabta iyo mowduucyada kala nooca ah ee otomaatigga agtiisa ku yaal.
Dan ku qabsashada kambuyuutarka macaamiisha ee aan laga maarmin oo degdegga ah.
Habka adeegga ee koowaad waa in horay loo sii xajisto otomaatigga oo si iskaa ah loogu adeegto.
Haddii loo baahdo miiska adeegga ayaa laga helayaa caawimaad iyo talabixin.
Waa waajib in marka danqabsashada loo joogo in la isticmaalo af-shareerka, haddii aanay jirin sababo caafimaad oo diidaya.
Wabarashada heerka labaad
Waxbarashada heerka labaad (dugsiyad asare iyo machadyada xirfaddda) waxay sii wadayaan waxbarashada khadka internetka. Baahiyaha waxbarashada dugsiga ka dhacaysa ee aan laga maarmin waa la dammaanad-qaadayaa. Waxbarashada dugsiga ka dhacaysa waxaa la siinayaa tusaale ahaan ardayda ku jirta waxbarashada gaarka ah iyo kuwa garaad ahaan naafada ah iyo ardayada sababo gaar ah dartood u baahan taageerada shakhsiga ah.
Waxbarashada khadka internetka waxaa loo wareegay marka ay billaabatay xilliga qiimeynta cusub oo ah 3.12.2020 waxayna sii soconaysaa illaa iyo 31.1.2021 .
Kooxda iskudubbaridda Koronaha ee Aagga caasimaddu waxay diyaarinaysaa go’aamin deegaanka ah
Magaalooyinka Helsinki, Espoo iyo Vantaa, THL, HUS iyo waaxda maamulka Gobolka Koonfurta Finland ayaa waxaa 10 Sebteembar 2020 aasaaseen kooxda iskudubbaridda Koronaha ee Aagga caasimadda. Hiisgiga kooxdan dabbaqaysa nidaam hawleedka aaga ku salaysan ee Wasaaradda sooshalka iyo caafimaadku waa xoojinka sawirka xaaladda iyo iskudubarididda iyo diyaarinta waxqabaduada deegaanka iyo kuwa maxalliga ah.
Kooxdan oo ka kooban hoggaan sare waxay qaabilsantahay diyaarinta iyo iskudubbarididda go’aaminta ku salaysan sawirka xaaladda ee mideysan. Go’aannada waxaa awooddiisa sharciga ku gaaraya hawl-wadeen kasta. Kooxdu waxay xoojinaysaa wadashaqaynti ka socotay wakhtiga Koronaha oo dhan aagga caasimadda.
Magaalada Helsinki waxay qaabilsantahay agaasimidda waxqabadka kooxda.